Fivoriana any Durres - Via Hotels
Atolotra ao Tirana
Atolotra ao Durres
ao amin'ny Durres
Manana toerana ho an'ny hetsika rehetra izahay!
Ankafizo ny fandraisana mafana amin'ny trano fandraisam-bahiny Albaney, hotely, villa ary trano fandraisam-bahiny indrindra.
Ireo toerana fanaovana fihaonambe any Durres
Raha maniry ny hanao ny fihaonambe na fivoriana any Albania's Durres ianao, dia tokony ho safidy tsara ianao. Ny tantaran'ny Durres mangatsiatsiaka dia miverina hatramin'ny 406 taona, izay mampifangaro amin'ny fomba mahafinaritra sy ny kolontsaina ankehitriny. Ny tanàna dia akaikin'ny zaridaina tsara tarehy nefa koa mankafy ny foibe tanàna iainana.
Toerana fihaonambe sy efitrano fivoriana any DURRES
Mazava ho azy fa manana fitaovam-pivoriana marobe sy efitrano fivoriana any Durres isika izay manamora ny fihaonanareo. Manolotra fihaonambe sy fivoriana amin'ny habe rehetra isika raha mandinika ny hetsika fananganana ekipa, kick-off na koa orinasa iray. Manampy anao izahay hahita toeram-pivoriana iray mba hahomby amin'ny fihaonambe.
Ny hotely fihaonantsika ao Durres
VH Belmondo Hotel no safidy mety indrindra amin'ny raharaham-barotra sy fitsangatsangananao eto Albania noho ny toerana tena tsara akaikinay amoron-dranomasina. Izy rehetra dia misy Wi-Fi haingam-pandeha, fividianana rivotra manokana ary fandroana manokana.
VH PRIME Villa Pascucci no safidy mety indrindra amin'ny raharaham-barotrao sy ny dia fialam-boly mahafinaritra eto Albania noho ny toerana tena tsara akaikin'ny morontsiraka. Miaraka amin'ny fomba minimalista maoderina, PRIME Villa Pascucci dia manana efitrano malalaka 50 izay natao manokana ho fampiononana ho an'ireo vahininay. Izy rehetra dia misy Wi-Fi haingam-pandeha, fividianana rivotra manokana ary fandroana manokana.
VH Western Star Hotel no safidy mety indrindra amin'ny raharaham-barotra sy fitsangatsangananao eto Albania noho ny toerana tena tsara akaikin'ny morontsiraka. Miaraka amin'ny fomba minimalista maoderina, Western Star Hotel dia manana efitrano malalaka 30 izay natao manokana ho fampiononana ho an'ireo vahininay. Izy rehetra dia misy Wi-Fi haingam-pandeha, fividianana rivotra manokana ary fandroana manokana.